१८८१ को ऐतिहासिक उच्च विन्दुलाई पार गर्दै नेप्से १८९३.२४ विन्दुमा, कारोबार रकम पनि हालसम्मकै उच्च
मंसिर ११, काठमाडौं । बिहीवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले यस अघिको ऐतिहासिक उच्च विन्दु १ हजार ८८१ पार गरेर १ हजार ८९३ दशमलव २४ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
यो दिन बजार १८ दशमलव ४३ अंकले बढेको हो । उता, ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव ८५ अंक बढेर ३६५ दशमलव १८ विन्दुमा पुगेको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार हालसम्मकै उच्च रकमको शेयर कारोबार भएको छ । यो दिन रू. ७ अर्ब ६१ करोड ३० लाख ३० हजार बराबरको १ करोड ७१ लाख ८८ हजार ९९ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । उक्त कारोबार २०१ ओटा कम्पनीको ७० हजार ३ पटकको व्यापारमा भएको हो । बिहीवार कारोबार रकमसँगै कारोबार कित्ता र व्यापार पटकले नै ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको हो ।
यस दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । यो कम्पनीको रू. ५८ करोड १३ लाख १७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
बिहीवार रू. १ हजार ३३७ मा खुला भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६५ ले बढेर १ हजार ३३९ पुगेको छ । यस दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अधिकतम रू. १ हजार ३८७ र न्यूनतम रू. १ हजार २७५ सम्म शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
बिहीवार एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले, पाँचथर पावर कम्पनीको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत र आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको बिहीवारको बजारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६ दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य यस दिन प्रतिकित्ता रू. ४९४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ७ हजार ५०६ मा झरेको हो ।
बिहीवार बजारमा बैंकिङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । यो दिन जलविद्युतको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत, अन्य १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको छ ।
व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ५ दशमलव ३३ प्रतिशतले घट्दा होटलको २ दशमलव १ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ६७ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत र जीवन बीमाको १ दशमलव २१ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
[Nov 26, 2020 10:00am]
SHARE BECHEKO2DINMA PANI MEROSHARE BATA TRANSFOR HUNA SAKENA, KAHA KE KEGARNE ?